काठमाडौंलाई समृद्ध बनाउने ‘भिजन’ मसँग छः विद्यासुन्दर शाक्य, मेयरका उम्मेदवार, काठमाडौं महानगरपालिका « Pahilo News
काठमाडौंलाई समृद्ध बनाउने ‘भिजन’ मसँग छः विद्यासुन्दर शाक्य, मेयरका उम्मेदवार, काठमाडौं महानगरपालिका
प्रकाशित मिति :4May, 2017 9:18 am
तपाईलाई एमालेले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । जित्ने आधार के के हुन् ?
काठमाडौँ एमालेको राम्रो पकड भएको जिल्ला हुँदा एमालेसँग अन्य दलले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुनै आधार नै भेटिँदैन । ०५४ सालको निर्वाचनलाई नै हेर्ने हो भने पनि काठमाडौँमा एमालेले मेयर, उपमेयरसहित दुईतिहाइभन्दा बढी सिटमा चुनाव जितेको थियो । त्यतिबेला नै एमालेले काठमाडौँमा सूर्यको झण्डा फहराउन सफल भएको थियो भने अहिले त अझ पहिलाभन्दा एमाले शक्तिशाली बनेको छ । त्यति मात्र होइन, देशैभरि अहिले एमालेले लिएको नीति, विचार र सिद्धान्तका कारण एमालेको प्रभाव देशव्यापी रुपमा बढेको छ । महानगरपालिकाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि एमालेको संगठन निकै बलियो छ । यी सबै कारणले पनि एमालेले यस पटक काठमाडौमा विजय हासिल गर्न सक्छ ।
मेयरका आकांक्षीहरुले असहयोग गर्ने स्थिति छ कि छैन ?
उम्मेदवार चयन हुनुभन्दा अघिसम्म मेयरका प्रतिस्पर्धी धेरै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले लामो समयपछि हुन लागेको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो । तर, जब उम्मेदवार चयन भयो, त्यसपछि आन्तरिक कलह समाप्त भएको छ । गुट–उपगुट भन्ने कुरा अब एमालेमा छैन । एमाले हिजो–अस्ति भर्खर केही सांसद् खाइहालौँ, मौका मिल्यो भने एक जना मन्त्री भए पनि पड्काई हालौँ भनेर आएको पार्टी होइन । निकै लामो संघर्ष र बलिदानीबाट स्थापना भएको पार्टी हो । यो पार्टीमा निकै लामो राजनीतिक संघर्ष गर्नुभएका, निकै योगदान गर्नुभएका नेताहरु हुनुहुन्छ । एमालेमा तीन–तीन जना त पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । नेपालमा रहेका कुनै पनि राजनीतिक दलसँग अहिले तीन–तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री छैनन् । यो एमालेको ठूलो सम्पत्ति हो । देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने भिजन भएका नेताहरुको ठूलो पङ्क्ति एमालेभित्र छ । पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर निकै कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएका नेताहरुको पनि ठूलो पङ्क्ति एमालेमा छ । त्यसैले एमालेले कच्चा खेल खेल्छ र घात–अन्र्तरघात गर्छ भन्ने सबै हल्ला मात्रै हो ।
धेरैले केशव स्थापितले नै विद्यासुन्दरलाई हराउन भूमिका खेल्छ भनेर हल्ला गरेका थिए । तर, उहाँले नै विद्यासुन्दर भनेको काम गर्ने मान्छे हो भन्दै काठमाडौंको मेयरमा जिताउनु काठमाडौंका जनताको अनिवार्य दायित्व बनेको छ भन्नुभएको छ । त्यति मात्र होइन, उहाँले मलाई जित्ने स्थिति बनाउनका लागि म दिलो ज्यानका साथ लागि पर्नेछु, कुनै कसर बाँकी नराखी, म आफैँ उम्मेदवार भएको ठानेर चुनावी मोर्चामा लागेको छु भन्नुभएको छ । जीवनराम श्रेष्ठ, वसन्त मानन्धर, सावित्री भुसाल सबै अहिले मभन्दा बढी चुनावी मैदानमा एमालेलाई जिताउनका लागि लाग्नुभएको छ । त्यसैले एमालेमा घात–अन्तरघात हुन्छ भन्ने हल्लाका पछि नलाग्न सबैलाई मेरो आग्रह छ । अहिले वडा–वडामा हामी ‘सात सूर्य सात छाप’ को नारा लिएर अघि बढेका छौँ । अहिले घरघर–टोलटोलमा हामी चुनावी अभियान लिएर पुगेका छौँ । यो प्रक्रिया निर्वाचनसम्म नै निरन्तर रहन्छ । पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका जीवनराम श्रेष्ठ, पूर्वमेयर केशव स्थापित, उपमेयर विदुर मैनालीलगायत धेरै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको अनुभव, उहाँहरुको सहयोग पनि एमालेलाई विजयी गराउनका लागि धेरै महत्वपूर्ण हुनेछ । म उहाँहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने छु । व्यक्ति आफैँ पार्टी होइन । पार्टीले नै व्यक्तिलाई नेता बनाएको हुन्छ । त्यसैले हामी व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीका नीति, विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने छौँ । उहाँहरु सबै मभन्दा पनि बढी खटेर चुनावी अभियानमा लागेकाले यस्ता आरोप लगाउनु नै बेकार छ ।
एमालेले सांगठनिक रुपमा कमजोर भएकाले राप्रपासँग तालमेल गर्यो भन्ने भन्ने पनि आरोप छ नि ?
एमाले काठमाडौँमा कमजोर छैन । एमाले एक्लै पनि जित्न सक्ने हैसियत राख्छ । त्यसैले एमाले कमजोर भएर राप्रपासँग तालमेल गरेको होइन । लिक बाहिर गएको राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउन राष्ट्रिय राजनीतिसँगै सरोकार भएर शीर्ष नेताहरुले तालमेल गर्नुभएको हो । यो तालमेलले एमालेलाई जित्न झन् सहज मात्र भएको छैन, जीत सुनिश्चित जस्तै भएको छ । अहिले तालमेललाई कतिपयले समस्या भनेका छन् । म त्यो मान्न तयार छैन । यो समस्या स्थानीय स्तरको होइन । राष्ट्रिय राजनीतिसँगै भएकाले त्यो समस्या त्यहीबाट हल हुनेमा हामी ढुक्क छौँ ।
तपाईँको महानगर सपना बारे केही बताइदिनु न ?
काठमाडौँबासीका केही सपनाहरु छन् । ती सपनासँग म परिचित छु । महानगरबासीका सपनालाई मैले नजिकबाट स्पर्श गरेको छु, राम्ररी बुझेको छु । सुन्दर, शान्त महानगर यहाँका जनताको मात्र होइन, मेरो पनि सपना हो । यो सपना गफ गरेर मात्र पूरा हुँदैन । फेसबुकमा हावादारी सपना बाँडेर मात्र सफल हुँदैन, त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ । काम गर्न पनि कार्यान्वय गर्न सक्ने ‘भिजन’ चाहिन्छ । त्यो भिजन मसँग छ ।
अहिले महानगरभित्र रहेको अस्तव्यस्त यातायात सबैको टाउको दुखाई बनेको छ । यसलाई व्यवस्थित तथा आधुनिकीकरण गर्नु पर्दछ । नयाँ प्रविधियुक्त यातायात पद्धति स्थापनाका लागि मैले जोड दिनेछु । महानगरमा केवलकार, मोनोरेल, तथा अत्याधुनिक बससेवा, इलेक्ट्रिकल तथा स्मार्ट गाडीहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
त्यसैगरी काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गरिनेछ । स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार तयार गर्नका लागि महानगरीय ‘ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क’ स्थापना गरिनेछ । महानगरको नागरिक हुनुमा गौरवान्वित महसुस हुने गरी र जनतालाई सुलभ तथा द्रुत सेवा प्रदान गर्नका लागि ‘महानगर स्मार्ट सिटिजन कार्ड’को व्यवस्था गरिनेछ । महानगरको झल्को दिने गरी पब्लिक ट्रान्सर्पोटेशन सेवा कम्तीमा दिनको २० घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यसैगरी महानगरभित्रका सबै टोल–टोलमा पुग्न कुनै पनि स्थानबाट ५ मिनेटभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने गरी ‘पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’को व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी साइकल लेनको निर्माण गरिनेछ । साइकल चढ्नेलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । ठाउँ–ठाउँमा साइकल पार्किङ स्टेशन निर्माण गरिनेछ । काठमाडौँ महानगरभित्र स्मार्ट पार्किड सिष्टमको व्यवस्था गरिनेछ । विभिन्न ठाउँमा स्वचालित भर्टिकलकार पार्किङ र अण्डरग्राउण्ड पार्किङ सिष्टमको व्यवस्था गरिनेछ ।
उज्यालो काठमाडौँका पनि त केही योजना होलान नि ?
काठमाडौं महानगरलाई २४ सै घण्टा खुल्ला जीवन्त सहरका रुपमा विकसित गरिनेछ । त्यसका लागि चाहिने ‘उज्यालो काठमाडौं’ कार्यक्रमको प्रारम्भ गरी निरन्तर रुपमा कार्यान्वयन गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ । काठमाडौं महानगरमा निश्चित स्थानमा सडक बजार निश्चित समयका लागि सञ्चालन गर्न दिइनेछ । विभिन्न स्थानमा ‘नाइट मार्केट’को प्रवद्र्धन गरिनेछ । प्रहरीसँग समन्वय गरी काठमाडौं महानगरभित्र सडक, चोक, गल्लीलगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक स्थलहरुमा सीसीटीभी जडान गरिनेछ । आगलागी भए तत्कालै आगो नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक वडामा ठाउँ ठाउँमा फायर हाइड्रान्टको व्यवस्था गरिनेछ । सुन्दर, समृद्ध, स्वस्थ र पर्यावरणमैत्री सांस्कृतिक जीवन्त सहरका रुपमा महानगरको विकास गरिनेछ । त्यसैगरी ‘क्लिन द सिटी‘ अभियानको थालनी गरिनेछ । काठमाडौंलाई पहिलो पटक ‘ई–गभर्नेन्स’ प्रणालीमा आवद्ध गरी पारदर्शी प्रशासन प्रणाली लागु गरिनेछ । रोजगारीका प्रशस्त अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ । अर्वान एग्रीकल्चरका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ र सोका लागि चाहिने उपकरण तथा बिउविजनहरु निःशुल्क वितरण गरिनेछ । महानगरमा निस्कने फोहरबाट वायोग्याँस उत्पादन गरी महानगरको व्राण्डमा त्यस वायोग्याँसलाई सहुलियत दरमा बिक्रीवितरण गरिनेछ ।
अन्य योजनाहरु के छन् ?
अर्वन युटिलिटीको उचित व्यवस्थापन गर्न स्मार्ट प्रविधिहरु प्रयोग गरिनेछ । काठमाडाँै महानगरभित्र ठूला–ठूला इभेन्टहरु गर्न ‘मेघा हलहरु’ निर्माण गरिनेछ । काठमाडौं महानगरलाई झिलिमिली सहरका रुपमा विकास गर्न चाहिने सबै खाले ऊर्जा स्रोतको व्यवस्था मिलाइनेछ । घरेलु हस्तकलाका उत्पादनहरुलाई नेपाल ब्राण्डिङ्ग गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गरिनेछ । काठमाडौं महानगरबासीको जीवनस्तर माथि उठाउन ‘महानगर विकास वण्डहरु’ निस्काशन गरिनेछ । ८० वर्ष उमेरदेखि माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि वार्षिक १२ हजार बृद्धभत्ता महानगरपालिकाले प्रदान गर्ने, बालकालिका, बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, पिछडा वर्गलाई महानगरले सञ्चालन गर्ने यातायात सेवामा निःशुल्क यात्रा गर्ने व्यवस्था मिलाउने छु ।